चलचित्र नाइके कहिले प्रर्दशनमा आउँदै छ ?
हामीले अल नेपाल यो चलचित्र नाइके मंसिर १९ गते अल नेपाल रिलिज गर्ने तयारीमा रहेका छौ । यसको पव्लिसिटीमा अहिले लागि रहेका छौ हामीहरु ।
चलचित्र चलाउन पब्लिसिटी कतिको आवश्यक छ ?
आफुले बनाएको चिज कस्तो छ भन्ने माध्यम पब्लिसिटी हो । त्यसैले चलचित्र बनाए पछि पब्लिसिटी एकदम आवश्यक कुरा हो । बिना पब्लिसिटी चलचित्र कस्तो छ भनेर दर्शकहरुले कसरी थाहा पाउने त ? हामीले पनि विज्ञापन, प्रोमो, गीत–संगीत सम्पूर्णकुरामा कुनै कम्प्रोमाइज गरेका छैनौ ।
नाइके कस्तो चलचित्र हो ?
यो एक्सन र मसलेदार चलचत्रि हो । चलचित्र हेर्न दर्शकहरु हलसम्म आइ सकेपछि २ घण्टा फुल इन्टरटेनमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ यस चलचित्रमा । सबै खालका दर्शकहरुलाई लक्षित गरी बनाइएको एक्सनप्रदान चलचित्र हो नाइके । बाँकीकुरा चलचित्र हेरे पछि नै थाहा हुन्छ ।
सायद आर्यनको पहिलो एक्सन चलचित्र होला होइन ?
हो हामीले आर्यन सिग्देललाई प्रायः एउटा लभर वोयाएकोरुपमा उनका चलचित्रहरुमा पाउँछौ । यो उनका अन्य चलचित्र भन्दा फरक चलचित्र हो । आर्यनलाई नयाँ लुक्समा यस चलचित्रमा दर्शकहरुले पाउनुहुने छ । दर्शकहरुको नयाँ टेस्टको चाहाना यस चलचित्रले पुरा गर्नेमा हामी विश्सत छौ । हामीले नेपाली चलचित्रमा के देख्छौ भने नयाँ प्रयोग भएका चलचित्र चल्ने गरेका पनि छन् । आर्यनले अलग धारको चलचित्र खेल्न खोजेको बेला छुट्टै स्टोरी मसँग थियो र उहाँलाई एक्सन हिरोको रुपमा लियौ । दुइजनाको संयोग नै मान्नु पर्छ । उहाँ एक्सनमा पनि राम्रो जम्नु भएको छ जुन चलचित्र रिलिज भए पछि दर्शकहरुले थाहा नै पाउनु हुने छ । सधै मख्ख पर्ने, मुसुक्क हास्ने क्यारेक्टरमा रहेका आर्यनलाई रिसाह टाइपमा देखाउन पाउँदा खुसी लागेको छ ।
नाइकेबाट कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
नाइकेबाट हामी पूर्ण आशावादी छौ । किनकी हामीले राम्रो चलचित्र बनाएका छौ । दर्शहरुले मन पराउनेमा पनि निर्माण युनिट ढुक्क छ ।
पछिल्लो समयमा पारिवारीक र कमेडी चलचित्रले नेपाली बजार पिटीरहेको अवस्थामा नाइकेलाई रुचाइएला ?
माथि पनि भने यो चलचित्रले दर्शकलाई हलसम्म तान्छ । यो भन्दा अगाडी आएका आर्यनका लभस्टोरी चलचित्र रुचाइए जस्तै यसलाई पनि रुचाइन्छ । चलचित्रका सम्पूर्ण कलाकारहरुको भूमिका पनि राम्रो रहेको छ । आर्यनको एक्सन चलचित्र दर्शकको माग पनि हो यतिवेला । आर्यनलाई अहिले एक्सन चलचित्रहरुको अफर पनि आइरहेको छ । अलविदा पुनरजन्म जस्ता आर्यनका एक्सन प्रदान चलचित्रहरु पनि आउन थालेका छन् । कमेडी र पारिवारिक चलचित्रहरु मात्र रुचाइन्छन भन्ने छैन एक्सन चलचित्रहरु पनि रुचाइन्छन् । दर्शकहरु आ–आफ्नै हुन्छन् । हामीले सबै दर्शकहरुलाई एकैठाउँमा ल्याउने कोशीस गरेका छौ यस चलचित्र नाइके मार्फत । यस चलचित्रमा कमेडी, रोमान्स, एक्सन र मनोरञ्जन सबै छ ।
तपाईंको पहिलो चलचित्र हो, निर्देशन गर्न कतिको गाह्रो छ ?
हो यो मेरो चलचित्रको हिसावमा पहिलो चलचित्र हो । मैले धेरै म्यूजिक भिडीयोहरु निर्देशन गरिसकेको छु । म निर्देशकको हिसावमा नयाँ भने होइन । म यो क्षेत्र विगत दश वर्ष देखी निरन्तर छु । अर्थात म १० वर्ष देखी निर्देशनमा नै छु । कुनै पनि चलचित्रलाई कता लाने भन्ने कुरा निर्देशकको हातमा हुन्छ । मलाई के लाग्छ भने निर्देशक भनेको चलचित्रको टिम क्याप्टेन हो । निर्देशकले क्रिएसन गर्न सक्नु पर्छ । चलचित्र नाइकेका आफुले सकेको खुबी मैले प्रस्तुत गर्ने भरमजदुर प्रयास गरेको छु । यस चलचित्रको निर्मातले पनि चलचित्र निर्माणमा कुनै कम्प्रोमाइज गर्नु भएको छैन त्यस हिसावले पनि चलचित्र राम्रो बनेको छ । चलचित्रको इन्टायर टीमले मिहिनेत गरेकाले मलाई निर्देशन गर्न त्यती गाह्रो भएन ।
निर्देशनमा कसरी लाग्नु भयो ?
म लामो समय देखी म्यूजिक भिडियो निर्देशनमा थिए जुन कुरा माथि पनि भने । मैले एउटा स्क्रिप्ट तयार गरेको थिए जसलाइ निर्माताले मन पराउनु भयो र निर्देशकको जिम्मा पनि मलाई नै दिनु भयो यसरी म नाइके चलचित्रबाट नेपाली चलचित्रको निर्देशकमा आए । अहिले मैले राम्रै काम गरेको अुनभव भइरहेको छ । नाइकेमा निर्देशक गरी सके पछि विभिन्न चलचित्रहरुको निर्देशन गर्नका लागि पनि अफर आइरहेको छ । मेरो निर्देशकिय क्षमता चलचित्र रिलिज भए पछि सबैले देख्नुहुने छ भन्ने मा म ढुक्क छु ।
यो चलचित्रले तपाईंलाई नेपाली चलचित्रक्षेत्रमा निर्देशकको रुपमा स्थापित गराउला ?
चलचित्र निर्देशकको हिसावले पहिलो चलचित्र भएकोले पनि मलाई चुनौती पक्कै छ । तर लामो समय म्यूजिक भिडियो, डकुमेन्ट्री र पोखराको स्थानिय चलचित्रमा काम गरेको अनुभवले पनि मेरो कामलाई मन पराइन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । मलाई विश्वास छ म नेपाली चलचित्रक्षेत्रमा निर्देशकको रुपमा स्थापित हुन्छु । निर्देशका चाहिने कुरा भनेको क्रिएशन हो जो म गर्न सक्छु त्यसैले म ढुक्क छु ।
निर्देशकले नायिकाहरुलाई शोषण गर्छन भन्ने आरोप यदा कता सुन्ने गरेको पाइन्छ नि ?
निर्माता निर्देशकले नायिकालाई शोषणा गर्छन भन्ने कुरा मैले पनि सुन्ने गरेको छु । चलचित्र खेलाउने बाहनामा यौन शोषणा समेत हुने गरेका कुराहरु न आएका पनि होइनन् । मेरो आफ्नो बारेमा भन्नु पर्दा राम्रो चलचित्रमा सुहाउने कलाकार खोजेको हो यसमा शोषणाको कुरा आउँदैन । फेरि निर्देशकलाई राम्रो कलाकार र उसको कला चाहिन्छ पर्दामा देखिन ।
चलचित्र नाइके मंसिर १५मा अल नेपाल एकसाथ रिलिज हुँदै छ । आर्यन सिग्देललाई पहिलो पटक छुट्टै गेटअपमा एक्सन भूमिकामा देखाइएको छ यस चलचित्रमा । जसलाई दर्शकले मन पराउनुहुने छ भन्ने आशा हामीले लिएका छौं । सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई हलसम्म गएर चलचित्र हेरेर प्रतिक्रिया जनाउनु हुन अनुरोध गर्दछु तपाईंहरुको पत्रिका फिल्मी खबर मार्फत ।